एकाएक फेरिएको झापाको माहोल : ६० जनाको जाँच्दा ३३ मा पोजेटिभ, ५० जनाको परीक्षण प्रतीक्षा
22nd May 2020, 08:17 am | ९ जेठ २०७७
काठमाडौं : नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या सुस्त गतिमा बढिरहँदा झापा जिल्ला अरुतिर भन्दा बढी सुरक्षित झै देखिएको थियो। सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू झापाका थिएनन्, झापा जिल्ला भित्र पनि थिएनन्। आखिर किन त? परीक्षण कम भएर वा परीक्षण गर्नुपर्ने सम्भावित नभेटिएर? तर, एकाएक केही दिन यता झापामा दैनिक संक्रमितको संख्या यसरी बढिरहेको छ कि - केही साता अघिको अवस्था पूरै उलटफेर भए झै लाग्छ।
बिहीवार एकै दिन झापामा २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दियो। झापाको पनि कचनकवल गाउँपालिका सबैभन्दा धेरै प्रताडित बन्यो। झापामा ३५ जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिँदा ३३ जना कचनकवल गाउँपालिकाकै परे।
छिमेकी राष्ट्र भारतमा लकडाउन थपिँदै गर्दा रोजगारीका लागि पुगेका युवा घर फर्किन थाले। सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गरे पनि लुकीछिपी गाउँ फर्कनेक्रम जारी रह्यो।
स्थानीय निकायले भेटेसम्मका फर्किएका युवालाई क्वारेनटाइनमा राख्यो। अहिले उनीहरूको कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। यसरी क्वारेनटाइनमा रहेका मानिसमा नै धमाधम कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो। यहाँको क्वारेन्टाइनमा रहेका अधिकांश युवाहरू भारतको मुम्बई, दिल्ली र मद्रासाबाट फर्किएका छन्। 'अहिले कोरोना देखिएका अधिकांश मुम्बईबाट आएका हुन्,' कचनकवल गाउँपालिकाका प्रवक्ता लक्ष्मीनारायण यादवले भने।
पहिलो लटमा जेठको पहिलो साताको सुरुवातमै ११ जनाको समूहमा भारतबाट युवाहरू गाउँ आइपुगेका हुन्। उनीहरूलाई स्थानीयहरूले विद्यालयको क्वारेनटाइनमा राखे। त्यसपछि अरू पनि आउनेक्रम बढिरह्यो। यसरी आएकाहरुको स्वाब सङ्कलन गरियो। पहिलो लटमा नै १० जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखियो। अहिले पथरिया माविमा ३४ जना क्वारेनटाइनमा छन्। हिजोमात्र एक जना युवक थपिएका छन्, त्यहाँ। अरु थपिनेक्रम जारी छ किनकि भारतबाट नेपाल आउनेक्रम ह्वात्तै बढिरहेको छ।
त्यस्तै, महेन्द्र माविमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा अहिले ९४ जना छन्। उनीहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर विराटनगर अस्पतालमा परीक्षणका लागि पठाइएको छ। त्यस्तै, सबैभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा माविमा ६५ जना छन्। उनीहरू मध्ये २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको प्रवक्ता यादवले जानकारी दिए। पाठामारीमा रहेको क्वारेन्टाइनमा पनि ३६ जना रहेका छन्।
कूल क्वारेन्टाइनमा रहेकामध्ये १ सय १० जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गरिएको हो। ६० जनाको रिपोर्टमा ३३ जना पोजेटिभ आएको हो। बाँकी रिपोर्ट नआइसकेको प्रवक्ता यादवले जानकारी दिए।
सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै गएपछि लकडाउनलाई थप कडाइ गरिएको छ। गाउँपालिका पूरै सिल गरिएको छ। मानिसहरूलाई आत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट निस्कन समेत रोक लगाइएको छ।